Ciidanka DF ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo ku sii siqaya degmada Baraawe – Radio Daljir
Ciidanka DF ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom oo ku sii siqaya degmada Baraawe
Febraayo 20, 2013 6:49 b 0
Baraawe, Feb 20- Wararka daljir ay ka helayso gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in ciidanka DF ee Soomaaliya iyo kuwa Amisom ay ku sii siqayaan degmada Baraawe oo ku teedsan badweynta Hindiya kana mid ah deegaanada wali ay maamulaan Al-shabaab.
Ciidanka dawladda oo garabsanaya kuwa Amisom ayaa u jihaystay dhanka Baraawe ka dib markii maalmihii danbe ay soo qabsadeen tuulooyin dhawr oo ku dhaw degmadaasi.
Ciidanka Al-shabaab ayaa la tilmaamayaa inay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen degmadaasi, waxaana laga yaabaa inay ku mintidaan maadaamaa ay tahay magaalo u muhiima ayna joogaan sida dadku qaar sheegayaan saraakiil sarsare oo uu ka mida yahay Sh Xasan Daahir Uweys.
Gudoomiyaha Shabeelaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur ayaa daljir u sheegay inaysan hakan doonin tan iyo inta ay qabsanayaan degmada Baraawe.
Warsixaafadeed ay soo saareen gudiga haga barnaamijka doorashooyinka Dawladdaha hoose ee Puntland ka dhicidoona